China Stainless simbi 254SMO-F44 vagadziri uye vanotengesa | Sekonic
Stainless Simbi 254SMO-F44
Mamwe Mazita Ekutengeserana: 254Mo, F44, UNS 31254, W.Nr 1.4547
Chiwanikwa F44 (254Mo) ine yakakwira yevasungwa molybdenum, chromium uye nitrogen, iyi simbi ine yakanaka kwazvo kurwisa pitting uye crevice ngura kuita. Mhangura yakavandudza kusagadzikana kwehurosi mune imwe acid. Uye zvakare, nekuda kweiyo yakakwira yezvinhu zveNickel, chromium uye molybdenum, kuitira kuti 254SMO ive nehutano hwakanaka hwekusimbisa ngura
254SMo (F44) Kemikari Kuumbwa
254SMo (F44) Zvivakwa Zvepanyama
254SMo (F44) Mechanical Properties
254SMo (F44) Inowanikwa Zvigadzirwa muSekonic Metals
254SMo (F44) Mabhawa & Matanda
254SMo (F44) Gasket / Mhete
254SMo (F44) jira & ndiro
254SMo (F44) musono chubhu & Welded mutopota
254SMo (F44) ubvise & coil
254SMo (F44) Zvinosunga
254SMo zvigadzirwa mumhando dzeBolts, screws, flanges uye mamwe mafasterners, zvinoenderana nevatengi.
Nei 254SMo (F44)?
• Mazhinji mashandisirwo akasiyana siyana ezviitiko aratidza kuti kunyangwe iine tembiricha yakakwira, 254SMO mumvura yegungwa zvakare inonyanyisa kupokana nehurosi hwekuita gwanza, ingori mhando shoma dzesimbi isina chinhu ine kuita uku.
• 254SMO yakadai sepepa rebhuruu rinodikanwa mukugadzirwa kweacidic solution uye mhinduro halide oxidative ngura kuramba uye ngura kuramba kunogona kufananidzwa neyakaomarara kwazvo muabhesi alloy ye nickel uye titanium alloys.
• 254SMO nekuda kweiyo yakanyanya nitrogen yezvinyorwa, saka simba rayo rinogadzirwa kupfuura mamwe marudzi esimbi isina simbi isina kukwirira yakakwira. Uye zvakare, 254SMO zvakare ine simba uye inokanganisa simba uye kugona kwakanaka.
• 254SMO ine yakakwira molybdenum zvemukati zvinogona kuita kuti ive yakakwira mwero weiyo oxidation mune annealing, iyo mushure measidhi yekuchenesa neyakaomarara pamusoro pane yakajairwa simbi isina chinhu yakajairika kupfuura yakaoma nzvimbo. Nekudaro, haina kukanganisa zvakanyanya kurwisa kwetsinga kwesimbi iyi.
254SMo (F44) Chikamu chekushandisa:
254SMO chinhu chakasiyana-siyana chinogona kushandiswa mumashandisirwo mazhinji emaindasitiri:
1. Petroleum, petrochemical michina, petro-kemikari michina, senge mvuto.
2. Pulp uye bepa michina yekubhenesa, senge pulp yekubika, kuchenesa, kuwacha mafirita anoshandiswa mudhiramu uye humburumbira kumanikidza ma roller, zvichingodaro.
3. Simba chirimwa flue gasi desulphurization michina, iko kushandiswa kwezvakakosha zvikamu: iyo yekumwa shongwe, flue uye yekumisa ndiro, yemukati chikamu, spray system.
4. Pagungwa kana gungwa remvura yekugadzirisa system, senge magetsi emagetsi achishandisa mvura yegungwa kutonhodza iyo yakatetepa-inemadziro Condenser, desalination yegungwa yemvura yekugadzirisa michina, inogona kuiswa kunyangwe mvura yacho isingayerere muchigadzirwa.
5. Maindasitiri eDesalination, akadai semidziyo yemunyu kana desalination.
6.Muchina wekupisa, kunyanya munzvimbo yekushanda yekloride ion.
Pashure: Stainless simbi 17-7PH
Zvadaro: Stainless Simbi 15-5ph
254SMo Stainless simbi
254SMo simbi nyere
F44 foring mhete
F44 simbi isina ngura
F44 simbi bhaa
Stainless simbi 254Smo
Stainless simbi F44
Inconel 718 UNSN07718 Bar / Pipe / Waya / Sheet / Bo ...
Haynes 25 Waya, Chiwanikwa R26 bhaudhi, stellite mhete, Stellite 6B, Welding waya, Stellite 6,